भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुने खतरा ! नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७८, शनिबार १२ : २५
भारतमा अझै कोरोनाको दोस्रो लहर कम भएको छैन , केही सुधारको सङ्केत चाहिँ देखिएको छ । । तर, विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार अबको तीन महिना भित्र तेस्रो लहर सुरु हुन सक्नेछ ।
सरकारी स्तरमा पनि तेस्रो लहरको तयारीलाई तीव्र बनाइएको बताइएको छ । यसै बिच दिल्ली हाई कोर्टले केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई एक नोटिस जारी गर्दै हामी तेस्रो लहर भन्दा धेरै टाढा छैनौ भनेर सावधान बनाएको छ ।
कोरोना एक्सपर्टहरूले अझै एक वर्ष कोभिड १९ ले दुःख दिने बताएका छन् । तेस्रो लहरको खतरा सँगै बच्चाहरूको लागी आइसियु बेड तयार पार्नु पर्ने बताइएको छ ।
यसको सिधा असार नेपालमा पनि पर्ने हुँदा बच्चाहरूको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने देखी , हस्पिटलहरूमा बच्चाहरूको लागी आइसियु थप्ने लगायतका आन्तरिक तयारी तीव्र बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसै बिच पनौतीमा बालबालिकाको लागी आइसोलेसन सेन्टर बनाउन लागिएको समाचार आएको छ ।
आउँदो केही महिनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणदर बालबालिकामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएका रिपोर्ट आउन थालेपछि पनौती नगरपालिकाले बालबालिकाका लागि यही असारमै आइसोलेसन निर्माण थालेको छ । नगरपालिकाले वडा नं ४ कार्यालयमा हाललाई ३० शय्याको आइसोलेसन बनाउन थालेको हो ।
स्थानीय रोटरी नेपालसँगको सहकार्यमा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन बनाउन थालिएको नगरप्रमुख भीमप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । “सम्भावित दुर्घटनाबाट बालबालिकालाई जोगाउन अहिल्यै पूर्वतयारी स्वरुप आइसोलेसन बनाउन थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा आवश्यकता परे वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि समेत नगरपालिकामा छलफल भइरहेको छ ।
नगरपालिकाले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि वैशाख अन्तिम साता २५ शय्याको अक्सिजनसहितको आइसोलेसन व्यवस्थित गरेको थियो । पनौतीमा हाल ८० महिलासहित १५८ कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने दुई दर्जन बढीको मृत्यु भएको छ ।
जिल्लास्थित कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी केन्द्र (डिसीसीएमसी)ले गत जेठ अन्तिम साता आउँदो केही महिनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणदर बालबालिकामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएअनुसार जिल्लास्थित अस्पताललाई २०५ शय्या छुट्टाउन लगाउने निर्णय गरेको छ ।
धुलिखेल अस्पताल, मेथिनकोट अस्पताल, बनेपास्थित शिर मेमोरियल र भोमी अस्पताललगायतलाई प्रारम्भिक चरणका २०५ शय्या छुट्टाउन अनुरोध गरिने केन्द्र सदस्यसचिव एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नरेन्द्र झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रक्षेपणअनुसार बालबालिकामा सङ्क्रमण फैलिए स्थानीय तहलाई समेत बालबालिकाका लागि छुट्टै अक्सिजनसहितको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गर्न लगाइनेछ ।